နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာ ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့သည့် လူရည်ချွန်ရွေးချယ်မှု ယခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ပြုလုပ် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
အကောက် ၀န်မင်းကြီးကျောင်းတိုက် ကျောင်းဒကာ အကောက်ဝန် မင်း မွလ္လာအီဘရာဟင် မိသားစု »
“ဒီလိုမျိုး ဘက်စုံထူးချွန် လူရည်ချွန်တွေ ပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက် စာမေးပွဲ စစ်ဆေးမှုတွေကိုတော့ ခရိုင်အလိုက် ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံပညာ ဦးစီးဌာနအလိုက် တင်ပြလာတဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေထဲကမှ ထူးချွန်သူတွေကို ရွေးချယ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးချယ်ခံရတဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေကို နွေရာသီ ပိတ်ရက်မှာ အပန်းဖြေခရီးစဉ်တွေကို စေလွှတ်ပေးဖို့လည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ခရီးစဉ်တွေကတစ်ဆင့် နေရာ၊ ဒေသ ကွဲပြားစွာ တွေ့ဆုံကြမယ့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ အချင်းချင်း တစ်ဦးချင်းအလိုက် စွမ်းရည်ဆက်သွယ်မှု၊ တစ်နယ်နဲ့တစ်နယ် စုပေါင်းပြီး အမြင်ချင်း ဖလှယ်နိုင်မှုတွေ ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန လူရည်ချွန် ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့မှ ဒေါ်ခင်မာထွေးက ပြောပြခဲ့သည်။
“လူရည်ချွန် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေကို မြို့နယ်အဆင့် စာမေးပွဲ၊ ခရိုင်အဆင့် စာမေးပွဲတွေ အဆင့်ဆင့် စစ်ဆေးပြီးမှ လူရည်ချွန် ကျောင်းသားတွေအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကလည်း လူရည်ချွန် ကျောင်းသားတွေ ရွေးချယ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခု၂၀၁၂-၁၃ ပညာ သင်နှစ်မှာတော့ ဘက်စုံထူးချွန် လူရည်ချွန်တွေကို တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ အနေနဲ့ ပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု အမှတ် (၃) အခြေခံပညာ ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။
အထက (၁) ဒဂုံမှ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဒေါက်တာအောင်ကိုကိုက “၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာလက ခရိုင်အဆင့် စာမေးပွဲတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီကနေ ထွက်ရှိလာတဲ့ ဘက်စုံထူးချွန် ကလေးတွေကို နွေရာသီမှာ အပန်းဖြေခရီး ပို့ပေးပါမယ်။ ရှစ်တန်းက ပုဂံ၊ ကိုးတန်းက တောင်ကြီး၊ အင်းလေးနဲ့ ၁၀ တန်းက ချောင်းသာ၊ ငွေဆောင် ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
၁၉၇၄၊ ၁၉၇၅၊ ၁၉၇၆၊ ၁၉၇၇ နှင့် ၁၉၈၀ ခုနှစ်များတွင် လူရည်ချွန်ဆု ရရှိခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံ စစ်တုရင်အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်လွင်က “အရင်က လူရည်ချွန်ဆု ဖြေဆိုခွင့်က ကျောင်းအဆင့် တန်းခွဲအားလုံးမှာ အဆင့် ၁ ကနေ ၁၀ အတွင်းရရင် မြို့နယ်အဆင့်မှာ ဖြေဆိုခွင့်ရတယ်။ ခုနစ်တန်းကနေ ၁၀ တန်းအထိ ဖြေဆိုခွင့်ရတယ်။ မြို့နယ်အဆင့် စာမေးပွဲမှာ မြန်မာစာ၊ သချာင်္၊ အထွေထွေ ဗဟုသုတ ရေးဖြေ ဖြေရတယ်။ နှုတ်ဖြေ ဖြေရတယ်။ ပြီးရင် အားကစား လေးမျိုးထဲက တစ်မျိုးကို မဖြစ်မနေ ယှဉ်ပြိုင်ရတယ်။ အဲဒါတွေ ယှဉ်ပြိုင်ပြီးမှ ရေးဖြေအမှတ်၊ နှုတ်ဖြေအမှတ်နဲ့ ကြံ့ခိုင်မှု စွမ်းရည်အမှတ်ဆိုပြီး အသီးသီး အမှတ်တွေရတယ်။ နောက်တစ်ခုက ပတ်ဝန်းကျင် အသင်းအဖွဲ့ လှုပ်ရှားမှု အမှတ်တွေပါ ရရှိဖို့အတွက် လူမှုရေး ကိစ္စတွေမှာ ပါဝင်ရတယ်။ ဥပမာ-ကျောင်းကောင်စီ၊ ကြက်ခြေနီစတဲ့ အသင်းတွေမှာ ပါဝင်မှုတွေ၊ အားကစား အဖွဲ့တွေမှာ ပါဝင်မှုတွေ စတာတွေ အပေါ်မူတည်ပြီး အမှတ်ပေးတယ်။ အဲဒါတွေအားလုံး ပေါင်းပြီးရတဲ့ အမှတ် အများဆုံး သူတွေက ခရိုင်အဆင့် ဖြေခွင့်ရတယ်။ ခရိုင်မှာလည်း အလားတူ ထပ်မံဖြေဆို ယှဉ်ပြိုင်ရတယ်။ ခရိုင်မှာ ဖြေဆိုတဲ့သူတွေ အားလုံးထဲကနေမှ ဗဟိုအဆင့်ဖြစ်တဲ့ ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာနကနေ ရွေးချယ်ပြီး လူရည်ချွန်ဆု ချီးမြှင့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုရရှိတဲ့ သူတွေကို အပန်းဖြေခရီးတွေ လွှတ်တာရှိတယ်။ သုံးနှစ်ဆက်တိုက် လူရည်ချွန်ဖြစ်တဲ့ သူတွေကို တက္ကသိုလ် ပညာသင်ဆုဆိုပြီး ပေးတယ်။ တစ်လကို ၇၅ ကျပ် ပေးတယ်။ တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းလခက တစ်လကို ၁၅ ကျပ်၊ အဆောင်စရိတ်က ၅၇ ကျပ် စုစုပေါင်း ၇၂ ကျပ်ပဲ ပေးရလို့ ကျောင်းနေဖို့ လုံလောက်တယ်။ လူရည်ချွန်ဖြစ်တဲ့ သူတွေထဲက သူငယ်ချင်း အတော်များများက နိုင်ငံခြား ရောက်နေကြတယ်။ လက်ရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေသက်ခင်လည်း လူရည်ချွန်ပဲ။ တခြားနယ်ပယ်တွေမှာလည်း လူရည်ချွန် ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူတွေ ရှိတယ်။ စာပေနယ်ပယ်မှာလည်း ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်လည်း လူရည်ချွန်ပဲ၊ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်လည်း လူရည်ချွန်ပဲ” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
၁၉၆၆၊ ၁၉၆၇၊ ၁၉၆၈၊ ၁၉၆၉ ခုနှစ်များတွင် လူရည်ချွန်ဆုများ ရရှိခဲ့သူ မြန်မာရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း အငြိမ်းစား သုတေသန အရာရှိချုပ် ဦးအောင်ကြည်ဝင်း ကလည်း “အားကစားစွမ်းရည်၊ ကာယစွမ်းရည်၊ အထွေထွေ ဗဟုသုတ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုတွေ အပေါ်မှာလည်း မူတည်ပြီး အမှတ်ပေးတယ်။ ဥပမာ- ကြက်ခြေနီ၊ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် စတဲ့သူတွေဆို အမှတ်ပိုရတယ်။ အရင်က လူရည်ချွန်ဖြစ်ဖို့က တော်တော် အားထုတ်ကြိုးစားမှ ဖြစ်တယ်။ ကျောင်းအဆင့် ပထမ၊ တစ်မြို့နယ်လုံး ပထမ၊ ပြီးရင် ခရိုင်အဆင့် ပထမ၊ အဲဒါတွေရရှိမှ လူရည်ချွန်ဖြစ်တယ်။ ခရိုင်အရည်အတွက် ရှိသလောက်ပဲ လူရည်ချွန် အရေအတွက် ရှိတယ်။ တက္ကသိုလ်မှာဆို တစ်နှစ်မှာ တက္ကသိုလ် တစ်ခုလုံးမှာ မေဂျာတစ်ခုမှာ တစ်ယောက်ရွေးတယ်။ လူရည်ချွန် စရွေးတဲ့ဟာက ၁၉၆၄ ခုနှစ် မှာ စရွေးတယ်။ အဲဒီစနစ်ကို ဒေါက်တာညီညီက စတယ်လို့ သိရတယ်။ အရေးအခင်း မတိုင်ခင် ရပ်သွားတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
– ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက
– ဒေါက်တာဖေသက်ခင် (ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာန)
– ဒေါက်တာမြအေး (ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန)
– ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင် (CEO, Eleven Media Group)
– ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင် (ကွယ်လွန်) (The Voice,Living Color) တည်ထောင်သူ
– ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့် (ငြိမ်း)
– ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (အသည်း အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)
– ဦးမောင်မောင်လွင် (စစ်တုရင်အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ)
– ဒေါက်တာချယ်ရီ သန်းသန်းတင် (သားဖွားနှင့်မီးယပ်အထူးကု)
This entry was posted on February 27, 2013 at 8:32 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.